Ayaa Qeexa Tiknoolajiyadda Shirkaddaada? | Martech Zone
Arbaco, Juun 8, 2009 Axad, Febraayo 9, 2014 Douglas Karr
Qeexitaanka tikniyoolajiyadda waa:
isticmaalka dhabta ah ee sayniska ganacsiga ama warshadaha
Muddo ka hor, waxaan weydiiyay, “Haddii waaxdaada IT ay dilayaan hal-abuurnimo“. Waxay ahayd su’aal jawaab weydiisatay! Waaxyo badan oo IT-ga ah ayaa awood u leh inay cabudhiyaan ama awood u yeeshaan hal-abuurnimada depart waaxyaha IT-da xitaa xayiri karaan ama awood u siin karaan wax soo saarka iyo iibka?
Maanta, waxaan ku raaxeystay la kulanka Chris Isku-darka. Waxay ahayd wada sheekeysi xamaasad leh waxaanan garowsanay inaan sii socono qiyaastii 45 daqiiqo meeshii aan rabnay.
Mid ka mid ah qaybaha xiisaha leh ee wadahadalka ayaa looga hadlay cidda iska leh go'aanka lagu iibsanayo barxad ama adeegyada SEO. Labadeenaba waan nuuxnuuxsanay markii go'aankaasi uu ku dhacay gacanta wakiil IT ah. Anigu sinnaba iskama dayin inaan liido xirfadleyda IT-ga - waxaan ku tiirsanahay khibradooda maalin kasta. Blogging loogu talagalay SEO waa istiraatiijiyad lagu helo hagaha… a masuuliyada suuq geynta.
Si kastaba ha noqotee, waa wax xiiso leh in waaxda IT-ga inta badan loo xil saaro mashiin ama nidaam go'aamiya natiijooyinka ganacsiga. Marar aad u tiro badan, waxaan arkaa natiijooyinka ganacsiga (hal-abuurnimo, ku soo noqoshada maalgashiga, sahlanaanta isticmaalka, iwm) oo gadaal ka qaadanaya go'aanka wax iibsiga.
Xulista annaga oo ah mareegta wax lagu qoro ee shirkadaha, badanaa waaxda IT-ga ayaa aaminsan in ay hirgelin karaan a free xal loogu talagalay blogga. Blog waa blog, sax?
Nevermind in waxyaabaha ku jira aan la hagaajin
Nevermind in madashu aysan aamin ahayn, xasilooneyn, dayactir lahayn, aan loo baahnayn, iwm.
Nevermind in barnaamijku uusan ahayn mid lagu cabbiri karo malaayiin ka mid ah bogga iyo tobanaan kun oo isticmaaleyaal ah.
Nevermind in shirkadii dhistay ay ku bixisay boqolaal kun oo doolar cilmi baaris iyo horumarin si loo hubiyo ku dhaqanka ugu fiican iyo u hogaansanaanta mashiinka raadinta lagu soo daro.
Nevermind in isdhaafsiga adeegsaduhu u fudud yahay qof kasta inuu isticmaalo, iyadoo aan loo baahnayn tababar xoog leh.
Nevermind in nidaamku otomaatig yahay sidaa darteed looma baahna aqoon ku saabsan sumadaynta iyo kala soocista.
Nevermind in shaqaalaheennu ay kormeeraan horumarka macaamiishayada si loo hubiyo inay guuleystaan.
Nevermind in barnaamijku la yimaado tababaro socda si looga caawiyo dadka wax qora ee wax qora inay horumariyaan xirfadahooda ayna kordhiyaan ku soo noqoshadooda maalgashiga waqtiga.
Iyada oo SEO ah, inta badan waa isla doodda. Xitaa waxaan ku sugnaa dhinaca ka soo horjeedka dooda SEO, taas ayaan kuu sheegayaa uma baahnid khabiir SEO ah. Jeremy wuxuu i xasuusiyay qoraalkan… doh!
Ujeeddadaydu waxay ahayd in shirkado aad u tiro badani ay leeyihiin MAYA mashiinka raadinta oo ay ka maqan yihiin taraafiko badan oo khuseeya. Hadday uun sameeyeen ugu yaraan, waxay uguyaraan dhigi karaan goobtaas quruxda badan ee ay ku bixiyeen $ 10k hortooda dad yar oo soo booqday. Qoraalkan waxaa loo qoray inta badan shirkadaha aan lahayn wax tartan ah iyo wax aan fiicnayn… waxay ahayd codsi in ugu yaraan la sameeyo waxa ugu yar.
Shirkadaha ka shaqeeya warshadaha tartamaya, in kastoo, 80% la hagaajiyay xitaa ma dhawa. 90% kuma filna. Si aad u hesho darajo # 1 ah oo ku saabsan erey aad u tartamaya waxay u baahan tahay khibrad mid ka mid ah shirkadaha faro ku tiriska ah ee adduunka ka jira. Haddii aad ku jirto xitaa natiijooyinka mashiinka raadinta mashiinka raadinta ee dhexdhexaadka ah, waaxdaada IT-ga kuma geyso # 1. Nasiib ayaad yeelan doontaa haddii ay xitaa kugu helaan bogga ugu horreeya ee natiijooyinka.
Kuma wareejin doontid waaxdaada IT-ga mas'uul ka ah kooxdaada iibka, laakiin waxaad iyaga u dhiibaysaa mas'uul tiknoolajiyad ka hor istaagi karta shirkaddaada inay iibiso. Haddii aad si ficil ahaan ah u adeegsanayso tikniyoolajiyadda… hubi inaad si buuxda u baartid fursadaha iyo faa'iidooyinka ka hor intaadan u maleynin inaad keligaa sameyn karto!
Jul 10, 2009 markay ahayd 2:21 AM
Waxaa jira adduunyo farqi u dhexeeya barta wax lagu qoro madal iyo SEO istaraatijiyad.
Barxad barta wax lagu qoro ayaa ah isku-darka softiweer iyo qalab, waaxyaha IT-gu way ku fiican yihiin isku-darka kuwaas. Waxa kale oo jira iibiyeyaal badan oo shaqadan qabta, sababtuna waxay tahay inay leeyihiin softiweer gaar ah, ama inay iyagu leeyihiin ama kireystaan ​​qalabka wax lagu qoro, ama inay leeyihiin khibrad badan oo ay ku ilaalinayaan xirmooyinka IT-ga gaarka ah. Su'aasha ah sida aad uga faa'iideysanaysid maareynta bartaada wax lagu qoro ee u dhexeeya dadka guriga ku nool iyo kuwa dibedda laga yimaadaba waa "IT iibso / dhis / amaaho".
Istaraatiijiyad SEO ah, si kastaba ha noqotee, waxay ku dhowdahay inay gebi ahaanba ka madax bannaan tahay bartaada wax lagu qoro. Waad heli kartaa SEO weyn ama cabsi leh iyadoon loo eegin madasha. Laakiin adeegsiga shirkad SEO ah ayaa ah ma sida isticmaalka shirkad saddexaad oo IT ah. Waxay u egtahay sidii shaqaaleysiinta qorayaasha nuqulada ah oo fikradahaaga ku turjumi kara luqadda Google.
Hubaal, waad isticmaali kartaa barnaamij bilaash ah oo bilaash ah. Oo aynu caddaalad noqonno, Doug - WordPress wuxuu ku shaqeeyaa kaabayaal ammaan ah, xasilloon, aadna u tiro badan. Isticmaalayaasha WordPress waxaa ka mid ah Dow Jones, The New York Times, Magazine Magazine, Fox News iyo CNN — oo dhammaantood ka gudba imtixaankaaga "malaayiin bog ah, tobanaan kun oo isticmaaleyaal ah" Automattic (dadka sameeya WordPress) waxay leeyihiin tobanaan milyan maalgelin ganacsi, taas oo aan u maleynayo inay ka kooban tahay cilmi baaris ballaaran iyo miisaaniyadda injineernimada. WordPress maahan toy.
Si kastaba ha noqotee, WordPress waa uun barxad blog ah. Dhab ahaantii, waa uun kala badh madal blogging ah - barnaamijka furan ee laga helo barnaamijka WordPress (in kastoo ay jiraan adeegyo martigalin ah oo aan la tirin karin WordPress, oo ay ku jiraan WordPress.com.) Haddii aad xiisaynayso darajo kasta oo lagu kalsoonaan karo ama lagu qiyaasi karo, waxaad u baahan tahay inaad maal gashato qalabka iyo khibradda ku habboon.
Marka, waaxda IT-gu way ku saxsan tahay in balooggu uun yahay baloog waxayna isticmaali karaan aalado bilaash ah si ay qaybta blogku u socoto. Laakiin shaqada inteeda badan iyo inta badan qiimaha suurtagalka ah kuma jirto software-ka. Ku dhowaad barta oo dhan ee lahaanshaha baloog ayaa lagu suurtogeliyay iyada oo loo marayo istiraatiijiyad dhammaystiran oo joogto ah oo SEO ah. Markaad ogaato taasi waa waxa aad u baahan tahay, waa wax ay tahay inaad diyaar u ahaato inaad bixiso.
Caqabada ayaa ah helitaanka waaxaha IT-da inay ogaadaan in SEO-ga wanaagsan uusan aheyn gacan mug leh oo khiyaanooyin doqonimo ah, inay adag tahay, inay had iyo jeer is beddeleyso, iyo inay ka dhigeyso dhammaan farqiga adduunka.
Jul 10, 2009 markay ahayd 2:52 AM
Ma hubo inaad igu raacsan tahay iyo inaad igu raacsan tahay. Adiga iyo adiguba waan ognahay in Dow Jones, The New York Times, Magazine Magazine, Fox News iyo CNN aysan ku shaqeyneyn WordPress 'sida ay tahay'. Waxay ku wadaan iyada oo aan lahayn kharashyada dheeraadka ah ee kaabayaasha, kharashyada horumarinta mawduuca, kharashka hagaajinta mashiinka raadinta, iwm. Miyaadan u maleyneynin inay lacag ku bixinayaan waxbarida shaqaalahooda isticmaalka aaladahaas? Ama horumar in loo gudbiyo waxyaabaha ku jira barnaamijyadaas? Dabcan iyagu waa! Mid kasta oo ka mid ah ganacsiyadaasi waxay gashadeen xoogaa lacag ah si ay uga dhigto madal 'bilaash ah' iyaga.
Balooggu waa uun blog, laakiin barxadda wax lagu qoro maahan oo keliya barta wax lagu qoro. Mitirka xoogga erayga muhiimka ah, otomaatiga calaamadeynta, kala soocida iyo meeleynta waxyaabaha ku jira Compendium waa kala duwanaansho weyn. Waxay u baahan tahay in adeegsadaha uu waqti yar ku qaato ka walwalka 'sida' loo wax u qoro, 'sida' loo wanaajiyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo waqti badan oo laga walwalo 'waxa' loo adeegsado blog. Ganacsatada wax qora ee wax qoraya waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan farriintooda - maya barnaamijyadooda.
Waxaan idiinku balan qaadayaa in qofkasta uu furi karo Compendium oo si caqli gal ah u dhajin karo boostadaasna boostada ayaa lafiican doonaa. Tani maahan kiiska WordPress. Dadka intiisa badan oo aan shaqsiyan baray sida ugu habboon ee wax loogu qoro WordPress wax fikrad ah kama haynin inta ay la maqnaayeen qoraal kasta.
Mar labaad, diiradda waaxda IT-da badiyaa ma aha diiradda ganacsiga. Marwalba waan ku qanacsanahay 'facayga' dib u eegista 'barnaamijyadayda softiweerka ah si aan u hubiyo in aanan shirkadda khatar gelinayn; si kastaba ha noqotee, weligood awood uma yeelan doonaan inay aqoonsadaan faa'iidooyinka barmaamijka ama istiraatiijiyadda iyo saamaynta ay ku leedahay ganacsiga. Taasi maaha waxa loo baray, waaya aragnimadooda waxa ku jira, ama waxa ay tahay in looga faa’iideysto.
Ganacsatada ha u gaaraan go’aamada ganacsiga! U ogolow inay noqoto la taliyayaashooda lagu kalsoon yahay.
Jul 10, 2009 markay ahayd 4:32 AM
Kuma raacsani ama kuuguma waafaqsana qodobkaaga guud, kaliya waxaan caddaynayaa faallooyinkaaga.
Qofna ma dhihin in isticmaaleyaasha waaweyn ee WordPress ay wadaan barnaamijka iyaga oo aan lahayn qalabayn dheeri ah iyo kharashyada kaabayaasha. Waxaad tiri "waligaa ha iloobin in barnaamijku uusan ahayn mid lagu cabbiri karo malaayiin ka mid ah bog-faneedka iyo tobanaan kun oo isticmaale", laakiin taasi run maahan. Way cadahay inay macquul tahay in lagu cabiro WordPress (ama Blogger, ama Drupal ama DotNetNuke ama Compendium iyo wixii la mid ah) ilaa heerkaan, laakiin waa inaad maal gashataa qalabka, taageerida barnaamijyada iyo khibradaha farsamada. Su’aashu ma aha inay tahay iyo in kale suurto gal, waa haddii aad rabto inaad adigu sameyso ama haddii aad rabto qof kale inuu kuu sameeyo.
Haa, barxad blogging waa uun barxad blogging. Waa isku-darka softiweer iyo qalab ay soo saaraan baloog. Hubaal, qaar waxay leeyihiin astaamo kala duwan, astaamahaasna waxaa laga yaabaa inay leeyihiin qiime badan oo u qalma lacag ka badan. Haddii aad leedahay IndyCar, gaari BMW ah oo si buuxda u muuqda ama gawaarida lagu kalsoonaan karo, waxaad leedahay gaari baabuur oo laga kaxeyn karo dhibic illaa A illaa dhibic B. Ma runbaa in gawaaridaas qaarkood ay ku habboon yihiin howlaha qaarkood? Xaqiiqdii. Su’aashu waxay tahay: hawl noocee ah ayaad iskudayeysaa inaad gaarto?
Waan hubaa in haddii aad dhinac dhigto isticmaale Compendium iyo madal kasta oo bar-qoraal ah oo qoraal lagu qoro, boostada ku taal barta loo yaqaan 'Compendium blog' ayaa kaxeyn doonta taraafikada badan - xitaa haddii qoraalladu ay eray-u-eray isu mid yihiin. Taasi qiimo weyn ayey ugu fadhidaa shirkaddaada! Haddii kiiskan adeegsiga uu yahay mid wakiil ah, waxay ka dhigeysaa goob iib ah oo cajiib ah CB.
Laakiin aan eegno sababta boostadaas kaliya waxay heli doontaa taraafiko badan. Sababta badanaa waa sababta oo ah Compendium Shirkadda waxay leedahay hawlgal istiraatiijiyadeed oo socda. Waad cusbooneysiineysaa saldhigga markasta. Waxaad ku xireysaa fariimaha macmiilka si aad uga caawiso iyaga inay dhisaan sumcad. Waxaad la kulantaa macaamiisha waxaadna siisaa tababar iyo agab dheeraad ah. Waxaad dayactireysaa kaabayaasha dhaqaalaha ee aadka loo kalsoon yahay. Inta badan, haddii aysan ahayn inta badan faa'iidada Compendium ee aaladda bilaashka ah waa adeegga socda iyo taageerada aad siiso barnaamijkaaga, macaamiishaada, iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Mar labaadna, taasi waa faa iidooyin layaableh inbadan oo kamida macaamiishaaduna aad ayey u faraxsanyihiin. Laakiin maahan qayb aasaasi ah oo ka mid ah barnaamijkaaga iyo qalabkaaga "madal-qorista". Waxaad ku gaari kartaa natiijo isku mid ah adoo adeegsanaya barnaamijyo kaladuwan (laakiin waxay noqon laheyd shaqo badan!) Tani waa saamayn ay shirkadaha jecelyihiin DK New Media samee maalin kasta. Qof kasta oo ku lug leh go'aan gaarista shirkad sameynta loo yaqaan 'blogging' wuxuu u baahan yahay inuu fahmo nuunadan.
Arrinta aasaasiga ah halkan waa halka ay waax keliya mas'uuliyaddeeda ku dhammaato oo qof kale uu bilaabo. Ma jiraan jawaabo fudud oo su’aashaas laga qabo. Xitaa ka sii darran, haddii qayb kasta oo ka mid ah xariiqaas ay ka gudubto dibadda shirkadda oo loo wareejiyo iibiyaha dhinac saddexaad, waxaa bilaabanaya inay jiraan meelo kala cadaan ah oo u dhexeeya hay'adaha oo ay adkaato in la qiimeeyo halista iyo faa'iidooyinka. Sideed u ilaalin kartaa xayndaabkaaga haddii dadka dibaddu fursad u helaan? Ama, dhanka suuqgeynta: sidee u hubtaa in bixiyeha wax-soo-saaraha ee dibadda laga keenay uusan jecleyn oo uusan burburin astaantaada? Khatarahaasi waxay noqon karaan kuwo yar ama weyn, laakiin ma ahan eber.
Waan hubaa in go'aano badan oo la xiriira tikniyoolajiyadda ay gaareen IT-da iyada oo aan la ixtiraamayn saamaynta ganacsiga. Laakiin dhibaatadu waxay u socotaa labada dhinacba - dadka ganacsatada ah waxay u baahan yihiin inay waxbadan ka fahmaan IT-ga iyo taa lidkeeda. Wada shaqeynta intii aad iska hor imaan laheyd ayaa qof walba wax u tareysa.
Jul 10, 2009 markay ahayd 4:48 AM
Waad ku mahadsantahay cadeyntaas, Robby! Waxaan ku istaagi doonaa faallooyinka ugu dambeeya. Waxaan ku kalsoonahay agabkeyga IT-da inay noqdaan la-taliyayaashayda sidaa darteed wax doqonimo ah ma sameyn. Si kastaba ha noqotee, ma siin doono iyaga go'aanka ugu dambeeya ee ku saabsan aaladaha iyo istaraatiijiyadaha danta ugu weyn ee ganacsiga horay loogu sii wado. Midkeen kastaaba wuxuu leeyahay awooddiisa gaarka ah waxayna u baahan yihiin in si habboon looga faa'iideysto.